ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုက အကျင့်ဖောက်ပြန်မှုအပေါ် အနိုင်ရမှသာ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကု?? - Yangon Media Group
”အဂတိလိုက်စားမှုပုံစံအမျိုး မျိုးကို စဉ်ဆက်မပြတ်လျှော့ချရန် ဆိုရာတွင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေတစ်ခုတည်း နဲ့ မလုံလောက်ဘဲ တိကျသော သတင်းအချက်များဖြင့် ထုတ် ဖော်သတင်းပေးနိုင်သူများကိုတစ် ဖက်မှ လုံလောက်သောအကာ အကွယ်များပေးပြီး အခြားတစ် ဖက်မှလည်း ထိရောက်တဲ့ဆုချီး မြှင့်မှုများဖြင့် အားပေးအသိအ မှတ်ပြုမှုများ လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ သို့မှသာ အလုပ်ဌာနများအတွင်း အကျင့်ဖောက်ပြန်နေသူများကို ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူက ရင် ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာကြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မီးများမီးနိုင်၊ ရေများရေနိုင် ဆိုသလို ဖြောင့်မတ်တည်ကြည် မှုက အကျင့်ဖောက်ပြန်မှုအပေါ်အနိုင်ရအောင် လုပ်နိုင်မှသာ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် နှင့် အဆင့်တိုင်းတွင်ထိရောက် သော၊ တာဝန်ယူမှုရှိသော၊ အား လုံးပါဝင်နိုင်သော အင်စတီကျူး ရှင်များကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်နိုင်ရင် တော့ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ် ရေးဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သက် သက်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်” ဟု အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင်အဂတိလိုက်စား မှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်က အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များ အပေါ် လေးစားလိုက်နာမှုရှိသည့် အနေ နှင့်ရော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းအောင် မြင်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တစ် ရပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အနေ နှင့်ပါ ထုတ်ဖော်သတင်းပေးသူ များ အကာအကွယ်ပေးရေးဥပ ဒေတစ်ရပ် လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့ ရာတွင် ယင်းဥပဒေဟာ အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စ တစ်ခုတည်းနှင့် ပတ်သက်နေ သည်မဟုတ်ဘဲ အစိုးရဌာနများ၊အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်သာ ပတ်သက်နေတာ လည်းမဟုတ်ပါဘဲ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အောက်ရှိအစိုး ရများအများပိုင် သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အလုပ်ဌာနအားလုံးတွင် ထုတ်ဖော် သတင်းပေးသူများဟာ ငွေကြေခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်မှု၊ လူကုန်ကူးမှု၊ အစား အစာနှင့် ဆေးဝါအတုပြုလုပ်မှု၊ သိပံ္ပနည်းပညာဆိုင်ရာ လိမ်လည် မှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ် ရာရမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှု၊ ငွေညှစ်မှု၊ အထက် အောက်အနိုင်ကျင့်မှု၊ ဆရာမွေး တပည့်မွေးမှုစသည့် ကိစ္စများ အပါအဝင်ကို ဖော်ထုတ်တိုက် ဖျက်ရာတွင်လည်း ဒီဥပဒေဟာ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ကောင်းမွန် သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ရေးနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်မှုရှိပြီး ညီညွတ်ခိုင်မာ တောင့်တင်းစေရန်အတွက် ကျွန် တော်တို့ဟာ အလုပ်ဌာနတိုင်းမှာအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုတွေကို ဆက် လက်ထွေးပိုက်ထားလို့ မရတော့ ပါဘူး။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှင်းထုတ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကော်မရှင်၏၂ဝ၁၈ခုနှစ် မေလကရေးဆွဲခဲ့သည့် အဂတိလိုက် စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာ စီမံချက်(၂ဝ၁၈-၂ဝ၂၁)လုပ်ငန်း စဉ်(၁ဒသမ၄)တိုင်ကြားသူနှင့် သတင်းပေးသူများအား အကာအ ကွယ်ပေးရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အောက် ပန်းတိုင် (၁.၄.၁) တွင်ထုတ်ဖော်သတင်း ပေးသူများအား အကာအကွယ် ပေးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောဥပ ဒေမူဘောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အ စီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖော်ပြထားပြီး ဆောင်ရွက်ပြီးစီး ရန် မျှော်မှန်းထားသောအချိန် ကာလမှာ၂ဝ၁၉/၂ဝ၂ဝဟု သတ် မှတ်ထားပါကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရပ်နေသူအမျိုးသမီး၏ဆွဲကြိုးကို စက်ဘီးဖြင့်လာသူက ဆွဲဖြတ်လုယူထွက်ပြေးရာ ပြည်သူများ ဝိုင်းဝ??